Somali daily News – Caqabado Ka Taagan Baddalidda Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir…..
Caqabado Ka Taagan Baddalidda Guddoomiyayaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir…..
dr.yare May 22, 2017 0
Warar lagu kalsoonaan karo oon ka helany xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in ay taagan yihiin caqabado adag oo ka dhashay qorshe uu Gudoomiyaha gobolka Banaadir ku doonayo in uu ku bedelo Gudoomiyaashii hore ee Degmooyinka kuna magacaaao Gudoomiyaal cusub.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa diyaarsaday liiska dhalinyaro isugu jira Qurbo joog iyo kuwa saaxiib dhaw la ah uu doonayo in uu u magacaabo Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana xubnaha uu wato ku jira qaar kamid ah ragii ololaha u waday Madaxweyne Farmaajo.
Wararka kale aan heleyno ayaa sidoo kale sheegaya in Gudoomiyaha gobolka Banaadir uusan inta badan wax wadatashi ah kala sameyn Gudoomiyaasha uu magacaabayo Madaxda ka sareysa iyo Xildhibaanada kasoo jeeda Degmooyinka gobolka Banaadir.
Gudoomiye Taabit ayaa sidoo kale wada qorshe uu ku doonayo in qaar kamid ah Degmooyinka gobolka Banaadir uu ku siiyo dad kasoo jeeda maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira sida Puntland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Xildhibaano badan iyo Wsaiiro dacwo ka ah Giudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa la sheegay in ay u tageen Ra’isul Wasaaraha Soomalaiya una gudbiyeen xaqiraada uu ku hayo Gudoomiyaha gobolka iyo qorshaha uu ku doonayo in xaquuq dad leeyihiin uu seejiyo isaga oo awood sheeganaya.
Waxa ay si cad ugu sheegeen R/Wsaaaraha Xildhibaanada iyo xubnaha kale ee u tagay in Mustaqbalkiisa iyo kan Gudoomiyaha gobolka Banaadir ay saameyn doonto hadii aan wadatashi laga sameyn magacaabista Gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir .
Mid kamid ah Xildhibaanada ayaa noo sheegay in si qaldan uu wax u wado Gudoomiyaha gobolka uuna doonayo dad jeebka ugu jira in uu ka dhigo Gudoomiyaal degmo, waxa uuna Xildhibaankan sheegay in R/Wasaaraha la socodsiiyeen waxa jira hadii uusan wax ka qaban ay tilaabo qaadi doonaan.
Warar horey usoo baxayay ayaa sheegaya in ay diyaarsan yihiin Liiska shaqsiyaadka uu Gudoomiyaha gobolka Banaadir jeebka ku wato uuna doonayo in uu ka dhigo Gudoomiyaal degmo, hasa ahaatee caqabadahan soo baxay ayaa dib u dhac ku keenay waxaana laga yaabaa in uu isbadal ku sameeyo liiskii u diyaarsanaa uuna qaato talada Madaxda ka sareysa iyo Xildhibaanada.